I-Semalt: Musa Ukuphoqa i-Google Ukuzonda Isayithi Lakho
UJack Miller, i-8 (Semalt iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Omkhulu, uxwayisa ukuthi i-Google ingenza ibhulogi yakho noma iwebhusayithi ibonakale emiphumeleni yokusesha uma uzama ukuyikhohlisa nge-traffic eliphansi noma ukugxila kwegama elingukhiye. Isibonelo, uma udala eziningi zethrafikhi kuwebhusayithi yakho futhi iqhubeka ikhula ngezikhala ezimbalwa, i-Google izokwaziswa ngakho, futhi konke okuthunyelwe namakhasi esayithi lakho ekugcineni ziyophela emiphumeleni yayo yosesho. Futhi into embi kakhulu ukuthi awusoze waxwayiswa ngakho. Uzolahleka nje kwi-intanethi, futhi idumela lewebhusayithi yakho lingase libhubhise.
Uma uke wathengisa izixhumanisi kusuka kumuntu noma okuthiwa inkampani ehloniphekile ye-SEO, kunamathuba ukuthi i-Google izohlaziya isayithi lakho. Uma udala amakhulu kuya ezinkulungwaneni zezixhumanisi bese uzama ukufika ekhasini lokuqala, awukwazi ukufeza imiphumela oyifunayo. I-Google ikholelwa ukuthi ukuthenga izixhumanisi umkhuba omnyama we-SEO practice nazo zonke ezinye izinjini zokusesha zibiza ngokuthi ugaxekile. Izingosi ezingenhlonipho kanye namaphrofayela e-social media anikezela izixhumanisi ezikhokhelwayo, ezingenalutho. Ngakho-ke, akufanele uhambe nanoma iyiphi yalezo zindlela.
Ukujoyina ama-Directories angalungile okuxhumanisa
Uma ujoyine i-link link engafanele, kufanele ususe kuzo ngokushesha ngangokunokwenzeka. Izinkomba eziningi zizothumela i-URL yakho ngokungahambisani, futhi yilokho i-Google ayithandi kakhulu..Izinjini zokucwaninga zithinta kakhulu izinkomba njengegaxekile eliphansi, ngakho-ke akufanele neze uzikhethele futhi ubheke izinkomba zekhwalithi kuphela. I-Matt Cutts evela ku-Google ithi izixhumanisi zokuxhumanisa zingenye yezingxenye ezingaqondakali kakhulu nezingavamile ze-SEO.
Uma ungakaze uzwe mayelana nokuthengiswa kwe-athikili, ake ngikutshele ukuthi sekuphele iminyaka eminingi. Umqondo wukuthi ubhale izihloko, uphendule izinguqulo zayo ezahlukene futhi wenze izinguquko ezincane emazwini. Khona-ke ababhulogi behambisa lezo zihloko kumasayithi ahlukahlukene nge-backlinks. Amawebhusayithi ahloniphekile namabhizinisi, noma kunjalo, ahambanga nalolu khetho. Uma ukholelwa ukuthi i-Article Base noma i-E-Zine ingakulethela imiphumela yekhwalithi, wenza iphutha elibalulekile futhi ungabona iwebhusayithi yakho ilahlekile emiphumeleni yenjini yokusesha.
Ukufakwa kwegama elingukhiye
Kuphephile ukusho ukuthi ukugxilongwa kwegama elingukhiye akusikho ubungane kuwebhusayithi nganoma iyiphi imali. Uma ususebenzise eziningi zamagama angukhiye nemishwana esigabeni esisodwa, i-Google izokwehlisa maduze isikhundla sakho futhi ingalimaza idumela lakho lesayithi. Ukugxila igama elingukhiye kusho ukusebenzisa okuningi amagama angokhiye ngokuphindaphindiwe kokuqukethwe kwakho, futhi uma uthemba ukuthi kuzokuthola isikhundla esihle, ngeke kukuzuze nganoma iyiphi indlela.
Umbhalo we-anchor ongavamile
Ukukhathazeka okuyinhloko kwe-Google kususa umbhalo ongasemvelo we-anchor. Uma ungazi lutho ngalokhu, ake ngikutshele ukuthi imibhalo ye-anchor ibhekisela kumbhalo ngaphakathi kwesixhumanisi esithile. Kusho ukwakha izixhumanisi kwiwebhusayithi. I-Google isanda kuvuselela i-algorithm yayo, futhi imibhalo engeke ibe yinto engavamile manje ibhekwa njengegaxekile.
Kufanele uhlole njalo iwebhusayithi yakho ngezixhumanisi eziphukile futhi ulungise amakhodi we-HTML. Phinda le nqubo kathathu ngesonto ukuqinisekisa ukuthi isayithi lakho lihambisana nezinqubomgomo ze-Google. I-injini yokusesha ayithandi amawebhusayithi ngezixhumanisi eziphukile noma ezingenalusizo, ngakho-ke akufanele neze uhambe nazo nganoma yikuphi izindleko Source .